संसद् विघटन गर्नु संविधानको बर्खिलाप हो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की कोइरालाको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले सर्मथन गरेको थियो भने मनमोहनको बदर गरियो। यसो गर्नुको पछाडि अदालतले कारण दिएको थियो र आधारहरु पनि देखाएको थियो। सबैले आफू कार्यकारी भएपछि विघटन गर्ने खतरा भएको थियो। आफूले भनेजस्तो वातावरण भएन भने विघटन भन्ने चलन नै शुरुवात हुने खतरा देखियो। यसले संविधान नै फितलो भयो। आइतबार, पुस ५, २०७७
नेकपा नांगाहरुको नाचको अवस्थामा पुगेको छ : हेमराज भण्डारी [अन्तर्वार्ता] सहमति हुँदैन, भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री जानुहुन्न। प्रधानमन्त्रीलाई जे जे लाग्यो, त्यसमै ल्याप्चे लागे सहमति हुने। अर्को पक्ष पनि छ... बिहीबार, पुस २, २०७७
सर्वसत्तावादी र निषेधवादी चिन्तनले पार्टीको निर्णय मान्दैन : देव गुरुङ [अन्तर्वार्ता] अध्यादेश जारी गर्ने लामो समयदेखि कोशिस भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर मैले मिडियासँग ठ्याक्कै केही भनेको छैन। यी विषय व्यक्ति... मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७
सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता लिन्नँ : विमलेन्द्र निधि [अन्तर्वार्ता] मेरो उम्मेदवारीको विषयमा सबै जना विश्वस्त छन्। अडिग छन्। मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा कसैलाई आशंका छैन। उम्मेदवारी फिर्ता लिन्न पनि... आइतबार, मंसिर २८, २०७७
सरकारले करदातालाई स्किम दिएको छ, कमजोरी गर्‍याे भनेर नठाने हुन्छ : विनोदबहादुर कुँवर [अन्तर्वार्ता] म एउटा कुरा भन्छु, पुल बनाउनुपर्ने छ, त्यसको टेन्डर गर्दा पुल बनाएको अनुभव माग्ने कि नमाग्ने? मोटरेबल पुलको टेन्डर आव्हान गर्दा काठे... आइतबार, मंसिर २८, २०७७
अब पनि नेपालले आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाएन भने धेरै कुरा गुम्न सक्छ : इजरायली राजदूत गोडेर [अन्तर्वार्ता] नेपालबाट लिने भनेको घरेलु हेरचाहको श्रमिक हो। खासगरी वृद्धवृद्धाको हेरचाहको लागि लिन खोजिएको हो। यसको सम्झौता भइसकेको छ। अब यो कार्य... शनिबार, मंसिर २७, २०७७
ओली अस्पष्ट हुनुहुन्छ, नतिजा हासिल गर्न सक्नुहुन्न : डा बाबुराम भट्टराई [अन्तर्वार्ता] माओवादी र मधेसवादी आन्दोलनले पुरानो संरचनालाई भत्कायो तर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने बेलामा केपी ओली जस्ता मान्छे आएर बाधक भएर बीचमा ब... शनिबार, मंसिर २७, २०७७
भूमिको विषयलाई छाडेर भारतसँग अन्य विषयमा संवाद हुँदैन : राजन भट्टराई [अन्तर्वार्ता] अहिलेको जल्दोबल्दो विषय नै भूमिको हो, संवाद रोकिएको पनि त्यसैले हो। त्यही समस्याचाहिँ छाडेर अन्यतिर जाने कुरा हुन्छ र? आइतबार, मंसिर २१, २०७७
प्रधानमन्त्री पदका लागि एकता गरिएको थियो भनेर ओलीले भनिसक्नुभयो : वेदुराम भुसाल [अन्तर्वार्ता] उहाँ अहिले एमालेको अध्यक्ष होइन, नेकपाको हो। नेकपाको अध्यक्ष हुनुभएकोचाहिँ केन्द्रीय कमिटीले चयन गरेर हो। २०७५ जेठ ३ गते दुवै पार्टी... शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७
नेकपाले गरेको फोहोर सोहोर्न कांग्रेस सरकारमा जाँदैन : मोहनबहादुर बस्नेत [अन्तर्वार्ता] तिहारलगत्तै बैठक बस्ने बैठकले यो निर्णय गर्ने भनिएको थियो तर बैठक बस्न सकेको छैन। आन्दोलन कस्तो भनेर अब सडकमै आएर आन्दोलन गर्ने, टाय... बिहीबार, मंसिर १८, २०७७